တရုတ် 99.5% MIBK Methyl Isobutyl Ketone CAS 108-10-1 4-Methyl-2-pentanone စက်ရုံနှင့်ပေးသွင်းသူများ | သီအိုရီ
ဤပစ္စည်းသည်အရောင်မရှိသောပွင့်လင်းသောအရည်ဖြစ်သည်။ ပန်ပူအနံ့၊ mp-80 ° C, bp 117 ~ 118 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်, n20D 1.3960, ဆွေမျိုးသိပ်သည်းဆ 0.801, fp56 ° F (13 ° C), ရေတွင်မပျော်ဝင်နိုင်သော၊ ရေထုတ်ကုန်သည်ရေဆူနှုန်း ၈၇.၉ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ ရေပါဝင်မှု ၂၄.၃% နှင့် ketone ၇၅.၇% ပါဝင်ပြီးဖင်နိုလစ်၊ အက်ဒီဒိုက်၊ အီသို့မဟုတ်ဘင်ဇင်စသည့်အော်ဂဲနစ်အရည်ပျော်ပစ္စည်းနှင့်ရောထွေးသည်။ ဤထုတ်ကုန်သည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပြီးအငွေ့သည်မျက်စိနှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုထိခိုက်စေသည်။
အဆင့်မြင့် 4-Methyl-2-pentanone 99.5% MIBK Methyl Isobutyl Ketone CAS 108-10-1
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: ၄-မီသိုင်း -၂-ပန်တနနွန်
အခြားအမည်များ - ၉၉.၅% MIBK; Methyl Isobutyl Ketone
CAS အဘယ်သူမျှမ။ : 108-10-1
၁.၉၉.၅% MIBK သည်မီသိုင်း isobutyl ketone ဟုလည်းလူသိများသည်။ rodenticide ကြွက်များအတွက်အလယ်အလတ်ဖြစ်သည်။
2. ဆေးဝါးများနှင့်ဆိုးဆေးများအတွက်အလယ်အလတ်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ o-chlorobenzaldehyde ထုတ်လုပ်သောပိုးသတ်ဆေးများသည်ခြောက်သွေ့သောသီးနှံများနှင့်သစ်သီးပင်များတွင် aphids များကိုတားဆီးနိုင်သည်။ O-chlorobenzaldehyde oxime ကို o-chlorobenzidine အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ်ကလိုရင်းသည်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအလယ်အလတ်ဖြစ်သော o-chlorobenzidine ကိုရရှိနိုင်သည်။
3. nitrocellulose, resin, or gum လိုမျိုးအရည်ပျော်ပစ္စည်း။ အချို့သောအော်ဂဲနစ်မဟုတ်သောဆားများအတွက်ထုတ်ယူခြင်း။ အော်ဂဲနစ်ပေါင်းစပ်
4. Chromatographic စံသတ်မှတ်ချက်အရ၊
၅။ အရည်ပျော်ပစ္စည်းအဖြစ်ရောဆီချောဆီအတွက် dewaxing agent အဖြစ်အသုံးပြုသည်။
၆ ။ အဓိကအားဖြင့်ရမ်၊ ဒိန်ခဲနှင့်သစ်သီးအရသာများပြင်ဆင်ရန်အသုံးပြုသည်။
ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက် 200l ပလပ်စတစ်စည်, Ibc (1000l)
ဆက်သွယ်ပြီးတာနဲ့ရေနှင့်အတူ flush ။
wt% အက်စစ် (အက်စစ်အက်စစ်ကဲ့သို့)
20 @℃ g / cm3 @ သိပ်သည်းဆ
BP, (0 ℃℃ 101.3kp) ℃
ရှေ့သို့ Trimethyl Orthoformate TMOF 99% cas 149-73-5
နောက်တစ်ခု: ပလပ်စတစ် 3GO, 3G8, 3GEH cas 94-28-0 Triethylene Glycol Bis (2-EthylHexanoate)
ကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်းသည်ပေါ့ပါးသော Stabilizer LS 2020 CAS 192268 -...
စက်ရုံထောက်ပံ့မှု ၅၀% MIT Methylisothiazolinone /2...
အရည်အသွေးမြင့် 99% Acetophenone အရည် cas 98-86 -...
တရုတ်စက်ရုံမှစျေးနှုန်းကောင်း Monomethyl sebac ...
ကောင်းသောစျေးနှုန်း PtO2 ပလက်တီနမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် cas1314-15-4 ...
အရည်အသွေးမြင့် 2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DI ...